အကောင်းဆုံး Balustrade ထိပ်တန်းဟာ့ဒ်ဝဲကုမ္ပဏီ - Jiannuo
စိတ်ကြိုက် balustrade ထိပ်တန်း hardware ထုတ်လုပ်သူများတရုတ်မှ Jiannuo Balustrade ထိပ်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန် > Balustrade ထိပ်ဟာ့ဒ်ဝဲ
စျေးကွက်အပေါ်အလားတူထုတ်ကုန်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ် Balustrade ထိပ်တန်းဟာ့ဒ်ဝဲ, ကစသည်တို့ကိုစွမ်းဆောင်ရည်, အရည်အသွေး, အသွင်အပြင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆုံးသောထူးချွန်အားသာချက်ရှိပါတယ်, နှင့် market.Jiannuo အတွက်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုလွန်ခဲ့သည့်ထုတ်ကုန်များ၏ချို့ယွင်းချက်အကျဉ်းချုပ်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သူတို့ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အတော်ပင်။ Balustrade ထိပ်တန်းဟာ့ဒ်ဝဲ၏သတ်မှတ်ချက်များသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
ပင်မပစ္စည်း: 304, 316 သံမဏိ
အဆိုပါထုတ်ကုန်ကြီးမြတ်အသုံးပြုမှုခဲ့ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်ထဲမှာ ပို. ပို. အသုံးပြုလိမ့်မည်။
ပုံနှိပ်စာ Balustrade ထိပ်တန်း
အဓိကပစ္စည်း 304, 316 သံမဏိ
အဓိကပစ္စည်း 304 316 သံမဏိ
အဓိကပစ္စည်း 304.316 သံမဏိ
ကုမ္ပဏီများ၏အဓိကစီမံကိန်းများကို 2.What ရှိပါသလဲ
ဖြေလေဆိပ်, စူပါမားကတ်, တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံ, မြေအောက်ရထားဘူတာရုံ, အခြားသူများ။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ် R ကိုရှိ 3.Does& : D အဖွဲ့သည်?
အရည်အသွေးမြင့်မားနိုင်ရကြလိမ့်မည်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကိုအတူ 1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ။
2008 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Foshan JianNuo ဟာ့ဒ်ဝဲတရုတ်နိုင်ငံတွင် SHUNDA စက်မှုဇုန်၏ FoShan စီးတီး, NanHai ခရိုင်အတွင်းတည်ရှိပြီး, ကျနော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ရုံဖြစ်ကြောင်း stainlesssteel လက်ရန်းများနှင့် balustrade, အရောင်းပြခန်းဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်လုပ်အတွက်အထူးပြု, Point- ကုလားကာမြို့ရိုးကို fttings, doorhandles, ဆက်စပ်ဟာ့ဒ်ဝဲ -fixed ထုတ်ကုန်များနှင့်ပန်းကန်သတ္တု, etc ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့် inproject အထူးပြုနေကြတယ်, ကျနော်တို့ installation နဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခြုံငုံဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်, ချမှတ်ခြင်း, နည်းပညာအကြံပေးဆွဲထဲကနေ site ကို measurementto ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သဘောထားဆက်ကပ်အပ်နှံဝိညာဉ်ဆန်းသစ်အယူအဆနှင့်အတူကျနော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထုတ်ကုန်စီးပွားရေးနှင့်လက်တွေ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်ဝတ္ထုရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်အတူ။ အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာ, နည်းပညာရှင်နှင့်ဒီဇိုင်နာများ၏ဖွဲ့စည်းခိုင်မာတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာအသင်းနှင့်အတူစီးရီးမိတ်ဆက်ပြီးမှ, ထိုအပေါငျးတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများသေချာနိုင်ပါတယ်တင်းကြပ်စွာမြင့်မားတဲ့စံနှုန်းဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်တိကျအရွယ်အစားနှင့်နည်းပညာထုတ်လုပ်ဖြစ်ကြ၏ဤအတောအတွင်းကျနော်တို့ယခုအသစ်ကသုတေသနပြုနေကြသည် ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်ကျေနပ်အောင်နှင့်စျေးကွက်ရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် systematized အရောင်းနှင့်အပြီး-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုစနစ်ကတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ယခုငါတို့ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ Jiannuo ဟာ့ဒ်ဝဲအမြဲ "ဖောက်သည်ဗဟိုပြု, အရည်အသွေးပထမဦးဆုံး" ဝန်ဆောင်မှုအယူအဆအပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုနေကြတယ်, ကျွန်ုပ်တို့ ပို. ပို. ဖောက်သည် '' အတည်ပြုအဖြစ်ကိုယျ့ကိုယျကိုနေ့အားကောင်းနေ့ကဖွံ့ဖြိုးဆဲရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။